निद्रा लिनुहोस् : न धेरै, न थोरै | सुदुरपश्चिम खबर
सबै परिणाम हेर्नुहोस्
निद्रा लिनुहोस् : न धेरै, न थोरै
असार १९, २०७८
चाहे आधुनिक विकास होस् वा जीवनशैली या त भू–मण्डलीकरण नै, यी सबैले हाम्रो निद्रा बिथोलिदिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले बितेका वर्षहरूको तुलनामा विश्व मानव समुदायकै निद्रा खलबलिँदै गएको बताएको छ । आधुनिक अर्थव्यवस्थाले धेरैजसो व्यक्तिको समय तालिका बदलिदिएको छ । राति अबेरसम्म काम गर्नु वा रात्रिकालीन काम गर्नु अब धेरैको बाध्यता बनेको छ ।
यी हुन् महिलाले मनभित्र गुम्स्याएर राख्ने कुराहरू
अशोज ३, २०७८
मोजा गह्नाएर हैरान हुनुहन्छ ? यी उपाय गर्नुहोस्
बढ्दो आवश्यकता र त्यसलाई धान्नका लागि गर्नुपर्ने कामको चापको कारण मान्छेको कार्यावधि लम्बिएको छ । यसले सोझो रुपमा निद्रामाथि प्रहार गरेको छ । धेरै व्यक्ति यस्ता छन्, जो पर्याप्त सुत्नै पाउँदैनन् । यसको असर भने उनीहरुको स्वास्थ्यमा देखिँदैछ ।
अनिद्रा वा पर्याप्त निद्राको अभावमा धेरैलाई दीर्घरोगको खतरा बढेको छ भने तनाव, बेचैनी जस्ता समस्या देखिन थालिएको छ ।रातभर काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेकाहरु मात्र होइन, रात्रिकालीन मनोरञ्जनमा लिप्त हुनेहरु, मोबाइल एवं ल्यापटपममा मग्न रहनेहरु पनि मस्त निदाउन पाइरहेका छैनन् । यसरी निद्रा बिथोलिएसँगै विभिन्न किसिमको मानसिक समस्या देखापर्न थालेको छ । स्लिप डिसअर्डरको ८० भन्दा बढी प्रकार हुन्छन् । साथै, यसको कारण हार्ट अट्याक, डिप्रेसन, हाइ ब्लडप्रेसर, स्मरणशक्तिमा ह्रास जस्ता समस्या देखिन्छन् ।
यसकारण आउँदैन निद्रा
हामीमध्ये धेरैलाई थाहा छ कि भरपुर निद्रा लिनु स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै आवश्यक छ । यो थाहा हुँदाहुँदै पनि हामी पर्याप्त निद्रा लिइरहेका छैनौं । कामको व्यस्तताले मात्र नभई फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जालले पनि हाम्रो निद्रा बिथोलिदिएको छ ।
सुत्नुअघि कुनै आनन्दित गर्ने व्यायाम त हामी गर्दैनौं, त्यसमाथि आइसक्रिम, डेजर्ट् वा तातो कफी पिउने गर्छौं । यसले निद्रामा असर गर्छ । राम्रो त के हुन्छ भने हल्काफुल्का व्यायाम गरौं तर कडा व्यायाम पनि नगरौं जसले थकान महसुस गराउँछ ।
– सुत्नुअघि डरलाग्दो चलचित्र वा हिंस्रक सामग्री नहेरौं ।
– हिसाबकिताब वा व्यावहारिक कुरा मनमा नखेलाऔं ।
– दिनमा धेरै नसुतौं ।
– निद्राका लागि मदिरा सेवन नगरौं ।
– राम्रो निद्रा पाउनका लागि यदि तपाईं निद्राको चक्की लिनुहुन्छ भने त्यसलाई सुत्नुभन्दा एक घण्टाअघि सेवन गर्नुपर्छ ।
(अनलाइनखबर बाट सभार)
फ्रिजमा राखेको अण्डा यसकारण भुलेर पनि नखानुहोस् !!
पति र पत्नीबीचको उमेर कति वर्षले अन्तर भए हुन्छ जीवन सुखमय
पायल्सको उपचार विधी के हो ?
सफल यौनजीवनका लागि त्याग्नैपर्ने खानेकुरा
मिर्गौला सुरक्षित राख्ने सामान्य काइदा
प्राकृतिक विधिबाट कसरी निरोगी हुने ?
फेरियो संविधान, फेरिएन संस्कार
संविधान दिवसको अवसरमा ८ जनालाई माफी, ५२३ जनाको कैद कट्टा
भरतमणि पौडेल बने ’कमेडी च्याम्पियन २’ को विजेता
आशीर्वाद मिडिया प्रा. लि.
प्रबन्धक : मनिषा भट्ट
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत: बिरेन्द्र कलौनी
कानुनी सल्लहकार: चुरामणी अर्याल
केशब दत्त भट्ट ( मनोज )
प्रकाश भट्ट : बैतडी
उमेश प्रसाद बडु : कैलाली
© 2021 Sudurpashim Khabar